Ikamelo eligqamile nelinethezekile eduze nenkaba yedolobha lase-Trondheim. - I-Airbnb
Ikamelo eligqamile nelinethezekile eduze nenkaba yedolobha lase-Trondheim.
Ikamelo e-i-bungalow ibungazwe ngu-Anne Sine Van
U-Anne Sine Van Ungumbungazi ovelele
Indlu ihlelwe endaweni yokuhlala ethule kakhulu e- Řya e-Trondheim. I-Trondheim Spektrum, i-St.Olavs Hospital, i-NTNU, i-Nidaros Cathedral kanye nesikhungo saseTrondheim kuhamba ibanga elide. Ikamelo ligqamile elinombhede olala umuntu oyedwa, ikhabethe lezingubo zokugqoka, ideski futhi lisendaweni ephansi. Igumbi lokugezela elihlanganyelwayo elineshawa, i-wasbasin ne-WC, nokufinyelela emshinini wokuwasha/umshini wokomisa ngaphansi. Ikhishi elinazo zonke izinsiza liyatholakala. Ikamelo le-TV. Isidlo sasekuseni sinikezwa ngenani elengeziwe. Ukupaka kwamahhala.
Zonke izinyathelo zithathwa ukuze uzizwe uphephile ekhaya lami phakathi nalobu bhubhane lwe-coronavirus. Ngemva kokuba isivakashi ngasinye sikhanya kahle, zonke izindawo, izibambo zomnyango, okhiye, izivimbelo njll zihlanzwa kahle. Izibulala-magciwane zezandla zibekwe emnyango, futhi sibingelela ngaphandle kokuxhawula izandla futhi sigcina okungenani ibanga elingu-1 metre. Ngaphambi kokusebenzisa ikhishi, sonke sigeza izandla zethu, futhi unezandla zakho namathawula asekhishini.
Inkaba yedolobha isebangeni lokuhanjwa ngezinyawo, kunezindlela ezinhle ezigudla i-Nidelven (umfula) kanye ne-Trondheim fjord. Isibhedlela i-St.Olav (isibhedlela sase-NTNU) singu-800-900m ukusuka endlini yami. Iningi lamakhempu e-NTNU asebangeni lokuhanjwa ngezinyawo (isikhungo se-Kalvskinnet, isikhungo se-Gløshaugen, i-NTNU Business School).
Ibungazwe ngu-Anne Sine Van
Uma kungafanele ngibe sekhaya lapho ufika, uzothola ukhiye wakho ebhokisini elinokhiye eceleni komnyango wokungena.
UAnne Sine Van Ungumbungazi ovelele
Izilimi: Dansk, Nederlands, English, Svenska